सांगितिक ‘रियालिटी शो’ले तिर्छन् त रोयल्टी?
पुष्पा थपलिया बिहीबार, माघ १, २०७७, १३:०६
काठमाडौं- नेपालका टेलिभिजन च्यानलहरुले संगीतसँग सम्बन्ध भएका रियालिटी सोलाई राम्रै ठाउँ दिन थालेका छन्। नेपाल आइडल, द भ्वाइस अफ नेपालजस्ता फ्रेन्चाइज रियालिटी सोले विदेशी टेलिभिजन च्यानलको लत बसेका दर्शकलाई केही मात्रामा राहत दिलाएसँगै यसको लोकप्रियता बढेको हो।
रियालिटी सोको लोकप्रियता त बढेसँगै यसका विभिन्न पक्षहरु केलाउने काम पनि सुरु भएको छ। अहिले चर्चामा रहेको प्रतिलिपी अधिकार र रोयल्टीको बारेमा के गर्छन् त यस्ता सोहरुले? सबैले यो प्रश्नमा चासो देखाएका छन्।
संगित रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष महेश खड्काले यसबारे एग्रिमेन्ट भएको तर पैसा नतिरेको बताए। उनले भने, ‘केहीले एग्रिमेन्ट मात्रै गरेका छन् तर पैसा दिएका छैनन्, केहिले त बारम्बार पत्राचार गर्दा पनि एग्रिमेन्ट गरेका छैनन्।’
यसरी रोयल्टी तिर्नुपर्ने सोहरुमा नेपाल आइडल, द भ्वाइस अफ नेपाल, नेपाल लोकस्टार लगायत छन्। त्यस्तै डान्सिङ रियालिटी सो बुगीबुगी, छमछमी, डान्सिङ वीथ द स्टार लगायतले पनि रोयल्टी बुझाएका छैनन्।
त्यसो त, केही सोले पहिलो सिजनमा रोयल्टी तिरेको पनि खड्काले बताए। भने, नेपाल आइडल र द भ्वाइस अफ नेपालले पहिलो सिजनमा रोयल्टी बुझाए तर अन्य सिजनमा वास्ता गरेका छैनन्।
‘नेपालमा संगितसम्बन्धी रियालिटी सो टन्नै भएपनि अहिलेसम्म रोयल्टी तिर्ने सो पनि यहि दुई ओटा भएको खड्काले बताए। सुरुमा त दिए, अहिले वास्ता गरेका छैनन्,’ उनले थपे।
यसबारे जिज्ञासा राख्दा द भ्वाइस अफ नेपालका कार्यकारी निर्माता तथा प्रस्तोता सुशिल नेपालले गायक गायिकाहरु आफैँले गीत गाउन लगाउने बताए। उनले भने, ‘हामीलाई गायक गायिकाले किन एउटामात्रै गाइदिएको, अरु पनि गाइदेउ भन्छन्, कति त चित्तसमेत दुखाउँछन्। उनका अनुसार यस्ता सोहरुले गीतको प्रचारप्रसार हुने भएकाले रोयल्टी तिरिरहन जरुरी छैन।’
गायक तथा द भ्वाइस अफ नेपालका कोच दीप श्रेष्ठले पनि नेपालको कुरामा सहमती जनाए। उनले भने, ‘हाम्रा कार्यक्रममा गाएका गीतले चर्चा बटुल्न नसकेका गायक गायिकालाई पनि हिट बनाइदिन्छ। यो त हाम्रो फाइदाकै लागि हो नि।’ यस्ता रियालिटी सोले धेरै गुमनाम गीतलाई पनि प्रकाशमा ल्याइदिएको श्रेष्ठ बताउँछन्।
हुन पनि, यसअघि नेपाल आइडलमा पन्छी बोलको गीत चर्चामा आएको थियो। गीत निकै मिठो भएपनि प्रचारप्रसारको अभावले छायाँमा परेको पन्छी बोलको गीतलाई एक प्रतियोगी अमित बरालले गाए। उनले उक्त गीत गाउनेबित्तिकै सबैको नजरमा पर्‍यो र गुमनाम दार्जलिङे गायक पुष्पन प्रधानलाई सबैको माझमा ल्याइदियो।
यो कुरामा संगितमा लगानी गर्नेहरु भने खुशी छैनन्। यसले गायक गायिकालाई मात्रै एकोहोरो फाइदा पुर्‍याएको उनीहरुको ठहर छ।
नेपालमा रियालिटी सो
करिब २ दशक अघिदेखि नै नेपालमा सांगीतिक रियालिटी सोको सुरु भइसकेको थियो, तिम्रो सुर, मेरो गीत। नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको तिम्रो सुर, मेरो गीत नामक रियालिटी सोले प्राश्ना शाक्य, जुनु प्रसाईँजस्ता चर्चित गायिकाहरु जन्मायो। तर यसको चर्चा लामो समयसम्म रहन सकेन, किनभने अझै बढी तामझामका साथ अर्को सांगीतीक रियालिटी सो सुरु भयो, नेपाली तारा।
दीपक लिम्बु, इन्दिरा जोशीजस्ता सफल गायक गायिका नेपाली ताराले नै जन्माएको हो। विस्तारै खोजी प्रतिभाको, सिङ्गीङ स्टार, नेपाल स्टारजस्ता रियालिटी सो सुरु हुन थाले। तर यी सफल हुन सकेनन्।
केवल लाइन सुरु भएसँगै नेपाली टेलिभिजनमा दर्शकको चाप स्वाट्टै घट्यो। त्यसैले मेहनत गरेर रियालिटी सो बनाउन व्यवसायी तयार भएनन्। त्यसैमाथि दर्शकको आँखामा विदेशका तामझामसहितका रियालिटी सोहरुले आनन्द दिन सुरु गर्‍यो।
लामै समयसम्म नेपाली टेलिभिजनमा रियालिटी सोको खडेरी पर्‍यो। व्यवसायी लगानी गर्न डराइरहेका बेला, एपी वान् टेलिभिजनले विदेशी फ्रेन्चाइज सिंगिङ रियालिटी सो नेपाल आइडल सुरु गर्‍यो।
भारतीय सो इन्डियन आइडल हेर्ने बानी परेका नेपाली दर्शकले यसलाई निकै मन पराए। दर्शकको भीड टेलिभिजनले केही हदसम्म जम्मा गर्न सक्यो।
नेपाल आइडलको सफलतासँगै त्यसैका केहि सदस्यले फेरि अर्को सो भित्र्याए, द भ्वाइस अफ नेपाल। विस्तारै घरेलु सोहरु पनि सुरु हुन थाल्यो। घरेलु सांगीतिक रियालिटी सो नेपाल लोकस्टारलाई दर्शकले मन पराए।
अन्य विधाका फ्रेन्चाइज रियालिटी सोहरु पनि बिस्तारै नेपालमा चर्चित बन्न थाले। संगितसँगै जोडिएका डान्सिङ रियालिटी सो बुगीबुगी, छमछमी, डान्सिङ वीथ दी स्टारले पनि युट्युव र टेलिभिजनमा राम्रै चर्चा बटुले।